Mihazona mafy, mamela an'i Sarah Hughes Review: Lesona avy amin'ny fiainana tsara niainana | Lahatsoratra - Bokin'izao tontolo izao
Tsy ilay boky tian'i Sarah Hughes ho izy io. Vao 46 taona ilay mpanao gazety dia nahafantatra fa tsy niverina sy niparitaka fotsiny ny homamiadan’ny nono azy vao notsaboina fa efa tsy azo sitranina intsony. Nanohy nanohitra ny antontan'isa izy ary niara-nipetraka tamin'izy ireo nandritra ny roa taona mahery (11 volana monja ny salan'isa), saingy tsy ampy hahavitana ilay asa nofaritany tany am-boalohany. Na izany aza, na dia mazava ho azy aza izany raha ampitahaina amin'ny sasany amin'ireo ezaka mbola tsy vita teo amin'ny fiainany (ny tena nampihetsi-po indrindra dia ny fitaizana ny zanany roa lahy), ny toko tsy hita toy ny Torohevitra ara-bola avy amin'ny mpiloka tsy mibebaka sy The Secret Life of the Catholic Saints, izy ireo. ketraka tanteraka ihany koa ny zavatra vitany.
Ity misy boky feno fahendrena sy saina, fahasoavana sy fahadalana. Tsy boky momba ny homamiadana koa izy io. Eny, amin’ny ankapobeny, ny fiainana miaraka amin’ny aretina, na ny fahafatesana aza, ny lohahevitra adino, hoy ny fanamarihany, fa anisan’ny ahitana sakafo sy haute couture, bonkbusters ary box set ihany koa ireny lahatsoratra fahatsiarovana ireny. Toy izany koa, na dia avelany hanao ady totohondry aza izy, ny feony sy ny heviny, ny fihetsehanany be dia be no mampanidina azy ireo.
Mampionona mihitsy ny asa sorany, nefa tsy manamaivana ny sisin'ny zava-misy.
"Hatramin'ny fahazazako dia efa revo amin'ny fahafatesana aho", hoy ny nanombohan'ny lahatsorany fanokafana, Ity ny fandevenana ahy ary hitomany aho raha sitrako. Amin'ny maha-zaza tezitra azy, dia mora nitsoaka izy ary nirodana tamin'ny nofinofy melodramatika momba ny faharavan'ny fianakaviany raha maty izy. Noho ny famakiana an'i Dickens sy Edgar Allan Poe, dia niitatra nankany amin'ny fandevenana gothic ireo eritreritra ireo tatỳ aoriana, ary rehefa lehibe izy dia nanontany tena hoe iza amin'ireo faribolana ao anatiny no mety ho faty tanora. Avy eo dia "ny fahafatesana, ilay mpandihy izay naka fanahy sy namitaka ahy nandritra ny androm-piainako, dia namaly ny fanasako tamin'ny farany ka nandondòna ny varavarako."
Sary manafintohina: mampalahelo, tezitra ary tsy misy dikany amin'izao tontolo izao izay mampifoha ny Katolisisma tamin'ny fahazazany, finoana nohazoniny. Ireo toetra ireo ihany koa dia mipoitra amin'ny alàlan'ny lahatsoratra mahery vaika momba ny fahaterahan'ny zanany fahatelo sy ny fahavokarana ny fahefatra ny taona manaraka. Lasa nihevitra izy mivady ho “zanak’aloka”, hoy ny fanazavany.
Mampionona mihitsy ny asa sorany, nefa tsy manamaivana ny sisin'ny zava-misy. Ao amin'ny Scars, manaiky ny filana "mijoro vavolombelona" izy, mijoro eo anoloan'ny fitaratra amin'ny alina ary mandinika ny vatany niova. Anisan'ny "amboarany" ny andalana manjavozavo manaporofo ny filalaovana fitia tamin'ny famorana vehivavy nandritra ny fotoana mampalahelo tao amin'ny sekoly tsy miankina. Ny sasany tamin'ireo mpiara-mianatra taminy dia nandray izany ho zava-dehibe kokoa, ary niaiky izy fa menatra ny manana ny fomba fiasany fa tsy miezaka manampy. Indraindray anefa dia ny fanekena no tena mampahory azy rehefa mahita ireo takaitra ireo. Araka ny nomarihiny, “mila mahatsapa zavatra mafy ny zatovo”.
Amin'ny ankapobeny dia tena mampihomehy izy. Rehefa fantany fa niparitaka, ohatra, ny homamiadany, dia noheveriny voalohany fa tsy te handao ny vadiny sy ny zanany izy. Ny faharoa? Mety tsy ho fantany mihitsy ny fiafaran'ny Game of Thrones: ireo boky, fa tsy ny fampifanarahana amin'ny fahitalavitra nobilaoginy, ka nahazoany ny anaram-bositra hoe "Lady Sarah" amin'ireo mpankafy azy.
Izy ireo dia boky averinao imbetsaka amin'ny fotoan-tsarotra, matetika lohateny izay mety ho tsinontsinona ny mpamaky tsy dia mivelatra loatra. Amin'ny maha-zatovo azy, ohatra, dia nahita an'i Virginia Andrews izy. Jackie Collins dia nampianatra azy taty aoriana fa izay apetrakao ao anaty fiainana ihany no azonao hialana amin'ny fiainana. Ary rehefa voamarina voalohany ny aretiny, dia i Jilly Cooper no notadiaviny.
Mifamatotra amin'ireo andrana sivy ireo ny toko avy amin'ny namana, anisan'izany ireo mpanoratra matihanina, izay manome fanazavana momba an'i Hughes amin'ny dingana samihafa amin'ny fiainana: any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa sy ao amin'ny Oniversiten'i St Andrews; Nanomboka mpanao gazety tao Manchester izy talohan'ny nifindrany tany Londres ary nandray anjara betsaka tamin'io gazety io sy Libromundo; Tiavo ary mipetraka any New York. Raha toa ka tsy azo ihodivirana ny feony toy ny fiderana, indraindray dia manenika hafahafa amin’ny fahavitrihan’ny asa sorany, dia asehon’izy ireo fa tena noraisin’ireo akaiky azy ho zava-dehibe ny teniny, ireo teny izay voafintina ao amin’ny lohatenin’ilay boky ny hafany: Tazony, avelao. .
Boky momba ny famotsorana izy io, ary ao anatin'izany dia tena ilaina ho an'ny ho faty toy ny ho an'ireo tia azy ireo. Fa eo ihany koa ny fitazonana ny fotoanan’ny fahafinaretana, na dia ao anatin’ny fitadidiana fotsiny aza ireo fotoana ireo. Ny fahaizan'i Hughes manao izay indrindra no mamiratra amin'ireo pejy ireo.
Holding Tight, Letting Go by Sarah Hughes dia navoakan'i Blink (£16,99). Mba hanohanana ny Guardian sy Observer, manaova dika mitovy amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana
Sokajy Vaovao farany Tags bien,, fitsapana, Nihazonako, Hughes, lesona, famelana, ny, famerenana, Sarah, mafy, una, fiainana, velona Ticket navigation
John Richardson's A Life of Picasso Volume IV Review: Demonia sa Andriamanitra? | boky biography